Kaddib Guushii Ballon d’Or, Luka Modric Oo Ku Dhawaaqay Kooxda Uu Ciyaaraha Kaga Fadhiisanayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kaddib Guushii Ballon d’Or, Luka Modric Oo Ku Dhawaaqay Kooxda Uu Ciyaaraha Kaga Fadhiisanayo
(05-12-2018) Xiddiga ugu wanaagsan caalamka ee Luka Modric ayaa ku dhawaaqay kooxda uu qorsheeyey inuu kaga fadhiisto ciyaaraha kubadda cagta, taas oo noqon doonta mid aanu funaanad kale ka daba xidhan doonin.
Modric oo xalay abaalmarinta Ballon d’Or ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo uu soo afjaray musalsalkoodii 10-ka sannadood ee dunida ay uga dhigayeen fagaareyaasha billadaha shaqsiga ah, ayaa waxa uu ka farxiyey jamaahiirta Real Madrid, iyadoo uu albaabada kasoo xidhay Inter Milan oo geed walba u fuushay sidii ay u heli lahayd.
Modric waxa uu sheegay in heshiiskiisa Real Madrid ay laba sannadood uga hadhsan tahay, isla markaana uu doonayo in aanu dabadeed koox kale u ciyaarin.
“Laba sannadood ayaa heshiiskayga iiga hadhay, mid kalena inaan ku kordhiyo ayaan rajaynayaa. Kooxdu waxay i tustay jacayl badan, waxaanan doonayaa inaan ciyaaraha kaga fadhiisto Real Madrid” Sidaas ayuu yidhi Luka Modric oo farxad ka muuqatay wejigiisa.
“Qoyskaygu way farxeen, kooxdana waa inaan wax weyn kaga farxiyo.” Ayuu ku daray, isaga oo dhinaca kale u mahad celiyey dhamaan dadkii u codeeyey.
Si gaar ah waxa uu Modric uga hadlay Antoine Griezmann iyo Kylian Mbappe oo u hambalyeeyey markii loo doortay xiddiga dunida ugu fiican.